Farmaajo iyo Khayre taariikh madow ayay u horseedeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed! – Idil News
Farmaajo iyo Khayre taariikh madow ayay u horseedeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed!
Dowladda Soomaaliya ayaa ka daba-tagtay, kana laabatay qaraarkii Jaamacadda Carabta ee ay horay u taageertay, kaasoo lagu cambaareynayay dowladda Itoobiya qorshaheeda ku saabsan biyo xireenka Wabiga Niil. Go’aanka dowlada Soomaaliya ayaa yimid kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed cadaadis ku saaray Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Khayre in dowlada Soomaaliya ka laabato qaraarkaas!
Waxaa xusid mudan in dowlada Qatar oo xiriir aad xun kala dhaxeeyo Masar ay taageertay qaraarka Jaamacada Carabta, ayna lama filan tahay in DFS buriso mowqifkeedii hore ee ay ku taageertay qaraarka Jaamacada Carabta. Annagoo wada xusuusanna in dowladda Soomaaliya ay la safatay Masar markii Wadamada Carbeed badankood xiriirka u gooyeen, kadib heshiiskii Camp David ee ay la gashay Israa’il 1978.
Soomaaliya waa dal madaxbanaan, go’aankan fulaynimada ah ee Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaruhu qaateena wuxuu meel ka dhac ku yahay sharafta, karaamada iyo madaxbanaanida Soomaaliya iyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labada dowladood. Masar abaal aan la soo koobi karin ayay Soomaaliya ku leedahay. Halyeeyo Masaari ah ayaana naftooda ku waayay difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed, baal dahab ahna uga qoran taariikhda Soomaaliya.
Sidoo kale Masar waxay door muhiim ah ku lahayd in Soomaaliya laga difaaco dagaalkii Itoobiya ku soo qaaday sanadkii 1964kii, hubkii ciidamada qalabka sida xilligaas ku dagaal galeena waxa laga keenay Masar ka hor intaan Ruushka iyo Jarmalka hub laga helin. Sidaas daraadeed nagama mudna walaalaheen inaan maanta ugu abaal gudno inaan Itoobiya kala jirsano.
Waxaa qoray : Hon. Mahad Salad